गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरूङ संकटमा, दीपक मनाङेले पनि विश्वसको मत नदिने ! « News24 : Premium News Channel
गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरूङ संकटमा, दीपक मनाङेले पनि विश्वसको मत नदिने !
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका खेलकूद मन्त्री राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे)ले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई विश्वसको मत नदिने संकेत गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरूङले आज प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । प्रदेशसभा बैठक मध्याह्न १२ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
आफूलाई स्वतन्त्र सांसद बताउँदै आउनु भएका मनाङेले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने संकेत गर्नुभएको छ । उहाँले बहुमत पुर्‍याउनेलाई आफूले साथ दिने बताउनुभएको हो ।प्रदेश सभामा बहुमत जता पुग्छ उतै आफ्नो साथ रहेको मन्त्री मनाङेको भनाइ छ ।
मनाङे अन्तिम समयमा गुरुङको पक्षमा नउभिएपछि गण्डकी सरकार संकटमा परेको छ । यदि मनाङेले विपक्षी गठबन्धनलाई मत दिएमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्नु हुने छ ।
मनाङे मनाङ ‘ख’बाट स्वतन्त्रमा निर्वाचित भएका थिए । तर, एमालेले भने आफ्नो सांसद् भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा ६० जना सदस्य छन् । त्यसमध्ये एमालेका २७ जना सांसद छन् । त्यसमध्ये माधव नेपाल पक्षका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले पनि संसदीय मूल्य र कार्यकर्ताको मनोभावना विपरीत काम नगर्ने दावी गर्दै आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वको मत पुर्‍याउन ३१ चाहिन्छ ।
काँग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग जम्मा ३१ मत छ । त्यसमध्ये सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मतदान गर्न नपाउने भएकाले विपक्षी गठबन्धनसँग ३० मतमात्र रहन्छ । मनाङेले साथ दिए विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत जुट्ने देखिन्छ ।
अदालतबाट पुनर्वहाली भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बस्ने बस्नु हुने भएकाे छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले मतको विपक्षमा उभिनका विपक्षी गठबन्धन दलहरुले आ-आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेका छन् । बुधबार गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका छुट्टाछुट्टै बसेका बैठकले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वसको मत नदिन ह्वीप जारी गरेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि विश्वासको मतको विपक्षमा उभिनका लागि आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको छ । यता, एमालेले भने विश्वासको मतको पक्षमा उभिनका आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको छ ।
प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतले गुरुङले वैशाख २९ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनुभएको थियो । अल्पमतको सरकार भएकाले उहाँले एक महिनाभित्र नै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।